Ee iskaga jeedso (sugna) Maalinta mid dhawaaqaa uu ugu yeedhi wax daran.
Isagaana abuuray labada nooc ee ah lab iyo dhaddigba.
Kana ahaysiiyay dhibic soo baxday.
Isagaana ahaysiin soo celinta kale.
Eebe isagaa wax Hodmiya isagaana wax faqiiriya.
Waana Eebaha xiddigga Shicra.
Eebe isagaa halaagay Caadkii hore.
Iyo Thamuudba waxna kama reebin.
(Nabi Nuux) Qoomkiisiina horuu (uhalaagay), waxayna ahaayeen kuwa dulmi badan oo xadgudub badan.
Qoomkii (Nabi Luudhna) wuu riday (Eebe).
Wuxuuna ka daboolay wuxuu ku daboolay (oo caddibaad ah).
Teebaadse nicmooyinka Eebe shakinaysaan (kana doodaysaan) dadow.
Kan (Nabiga iyo Quraankuba) waa dige ka mid ah digayaashii hore.
Wayna dhawaatay Saacaddii Qiyaame.
Wax Eebe ka soo hadhay oo ogna ma jiro (markay dhici).
Ma quraankanaad la yaabantihiin.
Ood qoslaysaan (idinkoo beenin) oydaanna ooyeynin (cabsi darteed).
Idinkoo waliba hilmaansan (islana wayn).
Ee dadow Eebe u sujuuda caabudana.
Waxaa dhawaatay Saacaddii (Qiyaame), dayixiina wuu dillaacay.
Hadday Gaaladu arkaan Aayad way ka jeedsadaan waxayna dhahaan waa Sixir daran.
Way beeniyeen (Nabiga iyo xaqa) waxayna raaceen Hawadooda, amar kastana wuxuu leeyahay meel uu ku sugnaado.
Waxaana ugu yimid dhab ahaan warar ku dheehan waano.
Waana Xigmad xeel dheer, maxaysa tari udigidi.